Sida loo abuuro Animation Text in dib markii Raadka
Ka dib markii Raadka Casharrada, Bilowday ka plugins
Si loo abuuro cajiib ah videos / filimada la dib markii Raadka, users waa in ay bartaan si ay u isticmaalaan plugins kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira talooyin badan iyo tabaha in aad kaaga caawiyaan in aad u noqoto pro a video tafatir sida saamaynta muuqaal ah oo kala duwan iyo tuuryo kala duwan oo xitaa xal kale.
Ka dib markii Raadka
1 ka dib Dhibaatooyinka ayeey Talooyin
1.1 Samee ogeed farshaxan Video dib markii Raadka
1.2 Samee Text Animation In Ka dib Raadka
1.3 Ikhtiraacay From qaabka dib markii Raadka
1.4 Samee Logo dhaceen ka dib Raadka
1.5 3D Animation ka dib Raadka
1.6 Samee Intro ka dib Raadka
1.7 Samee Animation Character ka dib Raadka
1.8 Samee Motion Graphics ka dib Raadka
1.9 Isticmaalka weer ka dib Saameyn
2 Ka dib markii Raadka YouTube Tutorial
2.1 YouTube Ka dib Raadka Tutorial
3 Ka dib Raadka tuuryo iyo plugins
3.1 Ka dib Raadka tuuryo
3.2 Best Free ka dib Dhibaatooyinka plugins
4 Ka dib markii lagu bedelan karo Raadka
4.1 Ka dib Saamaynta Alternative
Mid ka mid ah aadka loo doondoonayo isticmaalka ka dib Raadka waa awood u leh inay nooleyn qoraalka, iyo tan la yaab ma laha, waa wax ku ool ah, fudud si ay u hirgeliyaan Intaa waxaa dheer in u muuqataa mid aad u fiican ee wax soo saarka wax.
Waxaa jira, dhab ahaantii, dhowr siyaabood oo kala duwan si ay u nooleyn text in dib markii Raadka. Waxaad isticmaali kartaa presets, isticmaali layers camera ama gacanta booska.
Habka ugu horeysay si aad u hesho qoraal aamusnaan galay mashruuca sidoo kale waa habka ugu sahlan, iyo in uu yahay adigoo isticmaalaya presets gudahood ka dib Raadka, si aynu isla eegno habka.
1. Dejinta Up
Hubi in halkan aad leedahay mashruuca oo dhan ku raran yihiin ilaa waqtiga iyo diyaar u tahay inay la shaqeeyeen.
Si aad si ku filan u soo bandhigaan farsamooyinka, waxaan abuuray lakabka cusub mar aan footage ayaa waxaa laga keeno, iyadoo la isticmaalayo lakabka> New> adag , waxaan abuuray asalka ah lagu shido for duwan qoraalka madow yihiin sida farqiga u caawisaa Screenshot ka. Ka dibna waxaan ka abuurray laba shay oo dheeraad ah, mid ka mid ah oo ay ku jiraan erayada ah "Demo Text" oo ka mid ah in uu leeyahay 'Animation'. Tani soo dhisi doono hal dhibic bilaawga ee dhammaan saddexda Hababka ee animation ah, si la aan wax ka bilaabeyno tilmaan sida hoos, waxaan qaadi doonaa safar marayo codsanaya horena ah.
2. Isticmaalka horena ah
Waxaa jira laba siyaabood oo aad ku heli ku prests dhisay-in u dib markii Raadka, waxaad tagi kartaa iyada oo loo marayo qaab-dhismeedka file Animation> Presets , ama simly isticmaali Raadka iyo Presets tab ku yaal dhinaca midig. Waxaa jira wax badan oo presets iyo saamaynta, sidaas shaashada taas ayaan ku ballaadhisay in tab si ay u muujiyaan meesha saamaynta qoraalka waxaa la helay.
Sida aynu ka arki kartaa, waxaa jira wax badan oo kala duwan halkan xaalado badan oo taas, horena waa habka ugu fudud. Hoosaadka Mid kasta oo ka mid ah presets dhowr ah oo kale oo ay isku dayaan, iyo halka aan dhammaanteen samayno aakhirka la cadcad, waayo, dadka isticmaala cusub ee dib Dhibaatooyinka Waxaan mar walba ku talinaynaa dhowr ah oo isku dayaya baxay iyo experiementing si ay u arkaan kuwa ku habboon mashaariicda ugu fiican. Dadka isticmaala oo sidoo kale leeyihiin Adobe Bridge ku rakiban, waxaad ka arki kartaa xiisaha dhibaatooyinka soo xulato presets ka tab Animation kaas oo bilowday olole Bridge si ay u soo bandhigaan. Haddii aan, si fudud kuwaa oo aad wax u gal oo u ciyaaro.
3. Dalbashada horena ah
Tani waa arrin fudud ee jiidayeen horena animation aad rabto in aad ka shayga aad rabto in aad nooleyn gal. Haa, waa run ahaantii waa mid fudud in. Si kasta oo horena waxaa jira inta badan qaar ka mid ah fursadaha si ay ula qabsadaan animation ah, si loo waafajiyo, laakiin in waxa run ahaantii waa, animation la doortay oo leh meel loo qaato waqtiga la doortay ee waqtiga.
In sawir this, waxaan jiidi animation ah 'Full wareegga' gal shay 'Demo Text "ah, sida aan ka arki kartaa wax la doortay muuqanayaan casaan, waxtar leh haddii aad leedahay qaar ka mid ah walxaha ku dhaw si ay u hubiyaan in aad ku dhacay mid ka mid sax ah.
4. Isticmaalka sifo booska
Habka labaad ee dhiirogelin qoraalka waa in ay isticmaalaan gacanta ku mawqifyada in waqtiga. Hadda waxaan doonayaa in aan u guuraan ah shay 'Animation', aan innaguna sidaas oo ay ballaadhiyaan waqtiga text shay sida aan halkan ka arki kartaa.
Waxaan si gaar ah u raadinaya sifo booska qaybta ekaysiiyaan aan ka arki kartaa. Gujinaya stopwatch ku abuuraa keyframe ah shay in booskaas on waqtiga.
5. Abuuridda animation ah
Sidaas la keyframe bilowga abuuray, aad haatan ka weecan karo dulqabo waqtiga weeraryahanka ku haboon, ka dibna qabsato booska shayga si loo waafajiyo baahidaada, keyframe cusub si toos ah u abuuray doonaa wakhti kasta oo aad tan u sameeyaan. Marka la samaynayo dariiqadan aad guurto waqtiga on dhowr ilbiriqsi, dhigay booska cusub ee aad qoraalka, iyo waxaa loo abuuro keyframe kale oo kadibna ku celi. Ka dib markii Raadka buuxin doonaa dhimman iyo nooleyn aad qoraal u dhexeeya dhibcood doortay inta lagu jiro waqtiga la doortay, oo la isticmaalo dhowr keyframes aad sameyn kartaa xitaa waddo adag u qoraalka si ay u raacaan haddii aad rabto.
Halkan waxaan abuuray 4 loox muhiim ah in aynu u dhaqaaqo shay 'Animation' agagaarka 'Demo Text "Diidayo iyo ugu dambeyntii gaadhin nasashada waxaa hoos ku qoran. Inkastoo noocan ah ayey aad wax ku ool shaashadda eegto, taasina waa fudayd ee isticmaalka ka dib Dhibaatooyinka runtii waa uun shaqo oo dhowr daqiiqo si ay u gaaraan.
6. Layers Camera
Waxa ugu horeeya ee ay u tixgeliyaan la farsamadaa waxa ay tahay in layers camera dubaridi kara oo kaliya waxyaabaha ku jira hab 3D. Wixii habkan, talaabada ugu horeysa ee markaas waa bedesheen aad wax si 3D by toggling doorasho 3D in guddi ka kooban.
Halkan waxaan ku arki kartaa in aan ku toggled dhamaan lakabyada in 3D (icon kasaarka ah), guji sanduuqa taas loo sameeyo, iyo sidoo kale abuuray lakabka camera baahan yahay farsamadan, tani waa si fudud Layers> New> Camera , kaas oo markaas soo bandhigayaa fursadaha u camera laftiisa.
7. Fahamka views ah
Furaha aad ku duuban la lakabka camera waa in ay fahmaan sida dhaqdhaqaaqa khusaysaa alaabta, iyo si ay uga caawiyaan arrintan waxaa fiican inaad halkan aad bedesho aragtida guddi ka kooban, iyadoo la isticmaalayo dhibic ka hoos menu hoose.
Halkan waxaan ku soo wareegay labo views (waxaad isticmaali kartaa 4 sidoo haddii aad rabto), aragtida saxda muujinaysaa hore mashruuca ee sida aragtida 2D caadi noqon lahaa, aragtida saxda ah ayaa doonaya si toos ah hoos ku saabsan mashruuca iyo weeraryahanka ku beeran doonaa, oo meel u socdeen sidii aynu wax u guuraan. Views Kuwani waa mid qiimo leh u la socotid halkaas oo camera yahay iyo waxa wax walba ku yahay.
8. dhaqdhaqaaqa Abuuritaanka
Tani waxay ka shaqaysaa ay muhiimka ah, si la mid ah sidii ay gacanta ku mawqifyada sameeyey sidii aan uga wada hadalnay hore, si kastaba ha ahaatee waxaa jira tixgelin dheeraad ah oo ku yar halkan.
Sida aynu ka arki kartaa, imminka waxaynu nahay in hab 3D, shay kasta waxay leedahay saddex dhidibka booskiisa in hadda la qabsadaan, iyo in lagu daro fursadaha ka sii, camera laftiisa la dhaqaajin karin hareeraha alaabta aad, adiga oo isticmaalaya habka keyframe la mid ah sida ka hor, iyo sida ka hor, ka dib Dhibaatooyinka ka buuxin doonaa in dhaqdhaqaaqa u dhaxeeya keyframes aad u.
Halkan waxa aad ku arki saamaynta qabsado meel camera kaliya la isticmaalayo x-dhidibka, by isku dhaqdhaqaaqa camera iyo isku shaandheynta la socodka waxyaabaha aad ka abuuri karaan saamaynta dhaqdhaqaaqa mid aad u adag dhab karo.
Sida aynu ka arki kartaa, waxaa jira siyaabo kala duwan oo la abuurayo text dhaceen ee aad mashruuca, taas oo aad doorato ku xirnaan doontaa isticmaalka, laakiin presets xitaa bilowga ah abuuri kara saamaynta ka farxiya mashaariicda ay la buunbuuninayo aad u yar. Mawqifka Control ku darayaa in waxa suurto gal ah la sii dheer yar ee kakanaanta in geeddi-socodka, laakiin xitaa in uu yahay hab fudud si ay u fahmaan. Inkastoo dushiisa habka Layers Camera u muuqataa mid ah sida habka gacanta mawqifyada marka ay timaado waxa aad leedahay in la sameeyo, sida xaqiiqada ah waa fikrad dheeraad ah oo adag si ay u helaan in ay ku duuban leh. Ficilka dhabta ah ee la abuurayo keyframes iyo isbedel booska ay weheliyaan waqtiga, ka dibna jidaynayey ka dib Dhibaatooyinka inay dhiman ku buuxi, SIS dhab isla, iyo fikradda sahlan si ay u bartaan, si kastaba ha ahaatee, waxaa dheer ee ma aha oo kaliya dhidibka dhaqdhaqaaqa saddexaad, laakiin dhaqdhaqaaqa camera iyo sidoo idin siinayo ugu yaraan 6 dhidibka in la tixgeliyo, waa meesha dhib yimaado. Waxay qaadataa ku dhaqmaan si ay u awoodaan in ay arki meesha ay wax u socdaan iyo waxa aad isku dayaya in ay gaaraan tan, laakiin kama dambaysta ah ee fursadaha, shaki kuma jiro, waa mid ka mid ah si ay ujeedadoodu tahay ugu danbeyn.
Tani waa tutorial aasaasi ah oo ku saabsan dib markii Raadka, xirfad software video tafatirka. Si kastaba ha ahaatee, haddii video tafatirka waa cusub oo aad si, tixgelin Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , taas oo ah aalad awood laakiin si sahlan loo isticmaalo dadka isticmaala kaliya bilaabaya. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
Sida loo sameeyo a ogeed farshaxan Video in dib markii Raadka
Sidee si ay ula socdaan Dhaqdhaqaaqa in Adobe ka dib Raadka
Ka dib markii Raadka VS Adobe jilitaankii, 9 Khilaaf aad u sheegto oo ka mid ah waxaa ka wanaagsan?
Sidee Waxaad ahanaya, Vine Videos in Your Website
Sida loo beddel Ringtones on Phones Android oo iPhone
Sida loo RIP Film ka Shabakadaha
Sida loo Beddelaan MKV si Jabbuuti
Sida loo Beddelaan M4V in Mpg
> Resource > Video > Sida loo abuuro Text Animation in dib markii Raadka